Shiinaha Premix Glass Kuul BS6088A Soo-saar iyo Warshad | OLAN
Calaamadaha waddooyinka ayaa ka mid ah hababka ugu hufan uguna dhaqaale badan ee si ammaan ah u hagaya taraafikada. Farqiga udhaxeeya laamiga iyo midabaynta astaamaha calaamadeynta waxay siineysaa aragti cad oo xariiq ah xaaladaha maalinta.
Kaliya markii la isku darayo kuul muraayadaha tayada wanaagsan leh, calaamadaha waddooyinka ayaa noqda arrin badbaado cad oo muuqata habeenkii. Muraayadaha quraaradaha ayaa lagu dhajiyaa qalabka calaamadeynta laamiga saddex midkood. Waxaa lagu sii badin karaa marka la calaamadeynayo walxaha kahor intaan la codsan, ama waa lagu ridi karaa ama lagu buufin karaa rinjiga qoyan si toos ah gadaasha buufinta rinjiga, ama qeyb ayaa lagu ridi karaa qeybta epoxy ama walxaha kuleylka leh. Dusha sare ee kuullada waxaa ku daboolan rinjiga, iyadoo tallaabada wicitaanka ee rinjiga ay kor uga kacayso bartamaha bartanka kuusha. Tani waxay bixisaa laba ficil. Waxay ku xirtaa quraaradaha kuleylka rinjiga waxayna u oggolaaneysaa rinjiga inuu u dhaqmo sidii muuqaal faafinaya muuqaal dusha dib loogu laabanayo, iyadoo midabka rinjiga uu saameyn ku yeelanayo midabka iftiinka dib loo soo celiyay. Iftiinka galaya kuusha dhalada waa qaloocsan yahay wuxuuna ujihaystay xagga dambe ee gadhka wuxuuna dib uga muuqanayaa dhanka nalka hore iyo darawalka.
Muuqaalka: Nadiifi, hufan, oo aan lahayn wasakh muuqata
Qaab dhismeedka: Muraayada soodhaha ah
Cufnaanta: 2.4-2.6g / cm3
Indha indheyn 1.7
Wareeg: 80% (600 <Sieve size <850um, kuul wareegsan> 80%)
Mawduuca SiO2> 68%
Adag (Moh's): 5-7
Marka loo eego shuruudaha macaamiisha.
Hore: Ku shub Muraayadaha Ku Xidhmada EN1423
Sandblast Glass kuul 100 #
Sandblast Glass kuul 40 #